Taariikhda My Butros » 10 Qaabab ay u abuuraan A gashto Bodacious Bachelorette!
"Waxaa jira meel aan lahayn sida guriga."—Wizard ee Oz
Haddii aad taariikhdana online, long-distance, ama aad si qarsoodi ah Hawiyaha hindiga xafiis, ee "meel" danbeyn sheekada jacaylka aad qaadan doonaa meel meesha aad.
Oo sida ama ma, aad guri, guriga, ama shack, ayaa sheegay in wax badan oo ku saabsan qofka aad tahay iyo aqoonsigaaga. Sida aad dharka, waxay u bandhigtaa Muga ku saabsan shakhsiyadda iyo hab nololeed.
Maxay idinkaa iska idinku saabsan?
Haddii aad jeclaan lahaa inaan iska leh idinku tahay wax guur, ama yar qof qiimo leh ka soo laalaada baxay oo uu sii fiicnaanayaa in la ogaado, tixgelin talooyin wakhtiyaysan.
Qurxinta DO IYO SAAS
1. Ha ka dhigto meel gaar ah a, milicsiga xiiso qofka aad tahay.
Haddii ay whimsical, dambeeyaan, ama bold iyo bodacious, qortid wareejin gaar u ah oo ku saabsan.
Taasi quruxda isagoo aad boos gaar ah ay: aad boos, aad u dhadhan!
Eeg waxa aad la imaan karto. Isku day inaad la mideeyo midabo kala duwan, Hababka, dareen, iyo xitaa waqtiga. In heerarka bilowga, ma maal lacag badan ilaa aad hubtid waxa habboon shakhsiyadaada iyo hab nololeed.
3. Tixgeli nafsiga midabyada.
Ma ogtahay in midabo qaarkood waxay saamayn ku yeeshaan sida aad dareemayso iyo qabaa in qol ama meel gaar ah? Tusaale ahaan, beige iyo midab dhulka midabo kala yihiin dajinta; halka midabo sida cas iyo orange yihiin ruwaayadaha. Baayacmushtarku wuxu u isticmaala daaweynta midabka waqtiga oo dhan ee soo saara jawaabaha doonayo qaarkood. Waa in aad aad u.
4. Hayso meelood aad u fiican oo nidaamsan.
Your hooyaday waxay ahayd xaq u. Ma aha oo kaliya ma Barashada arinta tan gacan ka abuuro aragti wanaagsan leh jinsiga ka soo horjeeda, tagaa waddo dheer xagga aad baajin doonta wakhti iyo lacag.
5. "Bloom meesha aad ku beeray."
Xoogaa ka mid ah dabeecadda Keenida gudaha mar walba waa inuu u dhaqaaqo smart. Dhirta la abuuro jawi ah dugaal iyo raaxo. Waxay sidoo kale kaa caawin si ay u siiyaan tayada hawada wanaagsan. Xitaa haddii aadan ku dhalan oo leh "suulka cagaaran,"Waxaa jira noocyo kala duwan oo dhirta u baahan in yar" grooming "badan rabaayadda. Clueless? Google "dhirta fudud kordhaya" ama booqo waaxda Home Depot ee Garden deegaanka si lagaaga caawiyo.
6. Tixgeli miday ee dambiilood.
Waxaan jeclahay dambiilood! Waxaad sidoo kale Doono. Waxay tahay qaali ahayn, soo jiidasho, iyo si sahlan u heli.
U isticmaashaa kaydinta: si uu u qabto alaabta lagu ciyaaro xayawaanka, shukumaan, CDS, shah dhanan, ama qaybo tahay sida madaxtooyada istaraatiiji ah kaalinta gidaarada. Isku qas iyo dhigma midabo kala duwan, tirada iyo hanaanka dunta saamayn ugu badnaan.
7. Waxaa wareejisaa waxyaalo aad u jeclahay.
Haddii aad tahay lover music ah, waxa laga yaabaa in kaban ama durbaan. Waxa ay noqon kartaa quruxsan, madaxtooyada hindisaa in "guriga" photos of qoyskaaga ama xayawaanka. Haddii aad jecel in ay u safraan, mudantihiin soo bandhigi kari lahaa images of meelaha fog fog iyo dunida dacaladeeda ama laba. Add to this, qaar ka mid ah shamac waxyaabaha udugga leh, ama il dajiyay xasilloonida ah, for a dhameystir taabashada fiican.
8. Ha iska eafiya ee qol iyo jiko.
Waa meesha lamaane badan ku qaataan wax weyn oo waqti wadaaga cuntada, madadaalo, iyo in la abuuro xasuus waarta.
9. Dukaanka diyaariyeen ah ee goobaha loogu tala galay heshiisyo fiican.
Waxaad dhalin karaa waxyaabaha weyn qaar ka mid ah meelaha sida Dollar Family maxalliga ah, dukaamada stores tayo leh, estate iibka iyo suuqyada tagfi, iyo xitaa craigslist.
10. U hubso in aad qaadato ka hor iyo ka dib pictures.
Waxaa 'ku siin karaan dareen weyn oo guul iyo raalli ahaanshihiisa, iyo fikrado waxtar u leh mustaqbalka uqaadineed.
Iyadoo nadiifinta guga oo kaabiga soo, waxaa la gaaray waqtigii fiican u lahayn in ay u safeeyo oo quruxsan ilaa aad meel!